🥇 ingxelo yabalimi
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 891
Ngaba uyafuna ukuba liqabane lethu kwishishini kwisixeko okanye ilizwe lakho?
Ividiyo yeakhawunti yabalimi
Oda iakhawunti yeefama
Ukwenza ingxelo ngamafama kufuneka kwenziwe ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo. Ukuze ufezekise iziphumo ezibonakalayo kwinkqubo enjalo, kuya kufuneka ufake isoftware efanelekileyo kwiinjongo ezichongiweyo. Sebenzisa iinkonzo zeqela lobuchwephesha beenkqubo ezivela kwinkampani yophuhliso lweSoftware yeUSU. Isoftware yethu ikukhokela kulawulo lobalo lweefama zeenkomo ngokufanelekileyo. Inkqubo ayizukuzenza iimpazamo ngexesha lenkqubo yeofisi ngenxa yokuba inxibelelana nolwazi isebenzisa iindlela ezizenzekelayo.
Iindlela zekhompyuter zokunxibelelana nokuhamba kolwazi luphawu lwazo zonke izicelo ezikhutshwa liqela lethu kubasebenzisi bethu. Unokwenza ulawulo lobalo kwifama ngokungenasiphako ukuba ufaka usetyenziso lwethu kwiikhompyuter zakho zenkampani. Esi sicelo sigcina irekhodi yentengiso yokusebenza kunye nokwenza ngcono. Enkosi ngokusebenza kwayo, uya kuba nakho ukufumana inzuzo enkulu kwimeko yokhuphiswano lwentengiso yamafama. Akukho namnye kubachasi oya kuba nakho ukuchasa nantoni na kwishishini elisebenza njengesicelo sobalo mali oluphambili.
Imveliso yethu ebanzi ikunceda ukuba unciphise umthamo weenzuzo ezilahlekileyo. Kwaye, njengoko uyazi, inzuzo elahlekileyo ilahlekile. Ke, ngokusebenza ngokuntsonkotha kwengxelo kubalimi, ungalonyusa ngokupheleleyo inqanaba lenzuzo kwimisebenzi yeshishini. Isisombululo sethu sokugcina ingxelo seenkomo zokuphela kweenkomo sisona sikhokeli sentengiso esingaphezulu kokusebenza nje. Le nkqubo ibonelelwe ngerekhodi ephantsi kwaye, kwangaxeshanye, inomxholo osebenzayo onomdla.
Ukuba ubandakanyeka kulawulo lobalo lweefama kwifama, awunakukwazi ukuyenza ngaphandle kokuntsonkotha kolungelelwaniso lwethu, esi sicelo sikuvumela ukuba usombulule ngokukhawuleza iingxaki ezahlukeneyo kwaye uphendule ngokukhawuleza kwiimeko ezinobungozi. Uyakwazi ukunqanda uphuhliso olubalulekileyo kwishishini lomfama wakho ngokusebenzisa le app yobungcali. Amafama angonwaba ukuba ubalo-mali lwenziwa kusetyenziswa inkqubo yethu, kuba isebenza kakuhle kangakanani.
Amafama kufuneka asebenze ngokungenasiphako ukuba kunikwe ingqwalaselo efanelekileyo kulawulo lobalo lwamafama. Isoftware yethu esezantsi iya kukunceda ugcine iso kutyelelo olubalulekileyo. Isaziso esivela ngexesha siboniswa kwidesktop yomqhubi onoxanduva. Ngapha koko, inkqubo yokwazisa yenziwe kakuhle kwaye ayiphazamisani nomsebenzi wamafama. Ayisiyosaziso kuphela esenziwe ngokudlulela, kodwa ikwahlulwe ngokulula ngohlobo ukuze ungagqithisi kwindawo yokusebenza.
Kulawulo lobalo-mali, uya kukhokelela, uwafumane onke amakhuphiswano kwimarike. Amafama aza kunikwa inkululeko yokusebenza, into ethetha ukuba bazokwazi ukujongana nabona baphikisi banamandla ngokulinganayo. Uyakwazi ukwenza ulawulo ngaphakathi kwifama kwinqanaba elifanelekileyo lomgangatho ukuba ufaka isisombululo esipheleleyo kwiikhompyuter zakho.
Le mveliso inzima yokunxibelelana nezinto zolwazi ikhokelela kwintengiso ngenxa yokuba inerekhodi yokusebenza okuphezulu. Uyakwazi ukuthatha inkampani yakho kwindawo ekhokelayo kwaye unike abalimi ngeemeko ezifanelekileyo zokusebenza. Khathalela ulawulo lokuhamba komsebenzi kwinqanaba elifanelekileyo lomgangatho, ngaphandle kokuphulukana neyona nkcukacha ibalulekileyo. Inkqubo yethu yokuphendula ikunceda ukuba ube yinkokeli ngokuyigcina ekuhambeni kwexesha kunye nekholamu yakho yeForbes efanelekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, inkampani kufuneka ikwazi ukunyusa kakhulu inqanaba lohlahlo-lwabiwo mali, oko kukuthi, ukuphucula imeko yezemali yenkampani.
Ukuba usebenza eofisini ekufuyeni iinkomo, fakela isoftware ekhethekileyo kwiqela, isoftware yeUSU. Imveliso yethu yobalo-mali ikunika amandla okuhlalutya ishishini lakho kwizinga lehlabathi ukuba liyimfuneko. Ukulungiselela le njongo, unxibelelwano kunye neemephu zehlabathi zibonelelwa, apho iindawo ezifanayo ngoku ziphawulwe.
Ubume bale mihla bokugcina amafama kwi-USU Software kwenza ukuba kube lula ukujongana ngokukhawuleza nemisebenzi yemveliso. Ukuphicothwa kweefama zeenkomo kuyakwenziwa ngokungenasiphako ukuba imveliso yethu ebanzi iya kusebenza. Le software yenza ukuba kube nakho ukuphawula nayiphi na indawo emephini, ebonelela ngokucacileyo kulwazi. Ukuba unika ulawulo lolawulo kufanelekile, faka imveliso yanamhlanje yabalimi beenkomo. Ndiyabulela kwisisombululo esipheleleyo esivela kwi-USU Software, ifama yakho kufuneka ikwazi ukukhokela imarike kwaye inganiki abo sikhuphisana nabo ithuba elinye ngokuchasene nawe. Sebenzisa i-injini yokukhangela eyilelwe kakuhle ekuvumela ukuba ufumane ulwazi nokuba kukho ulwazi oluncinci olufumanekayo.
Uhlelo lokusebenza oluvela kwiprojekthi yeSoftware ye-USU ikhokelela kwintengiso ngenxa yokuba inerekhodi yokusebenza okuphezulu kwaye, kwangaxeshanye, ayibizi kakhulu. Isoftware yobalo-mali yomfama evela kwi-Software ye-USU ikunika ithuba lokuyila imisebenzi eyahlukeneyo yemveliso eneepikogram kunye nezinye izinto ezibonakalayo. Izisombululo zanamhlanje zokudityaniswa kwe-accounting yamafama zikunceda ulawule ngokukhawuleza inani elikhulu lemisebenzi ngelixa ungalahleki naziphi na izibonelelo zemali zokusekwa komfama.
Ifama yakho iya kusebenza ngokungenasiphako kwaye idatha efunekayo iya kugcinwa kwimemori yekhompyuter yakho. Nokuba unonxibelelwano lwe-Intanethi olubuthathaka kuphela, ulwazi lungagcinwa kwikhompyuter yakho kwaye lusetyenziselwe iinjongo zalo.
Imveliso ye-USU yeSoftware ebanzi yemveliso yokunika ingxelo ikuxhobisa ukuba ube ngusomashishini ophumeleleyo oxhaphaza izibonelelo zemali ngokungenachaphaza. Uphicotho lwamafama eenkomo luhlala lusenziwa ngokufanelekileyo, kwaye ishishini lakho aliyi kuphoswa yinzuzo. Yenza ulawulo lobalo lwamafama kwaye kwangaxeshanye wenze uhlalutyo lwemisebenzi yentengiso. Isoftware yethu yeefama zeenkomo ikunceda ulawule ngokukhawuleza umsebenzi wokwazisa ilogo yenkampani.
I-logo ngokwayo inokusetyenziselwa ukwenza isitayile esimanyeneyo sokwenza naluphi na uhlobo lwamaxwebhu. Ukubeka ilogo ngohlobo lwangemvelaphi kumaxwebhu ayenziweyo kuya kukunika ithuba lokwenza imisebenzi yentengiso. Ukwazisa ngebrand kuyanda kakhulu, kwaye ngayo, ukuthembela kwabathengi bakho kwiziko kuya kwanda. Isoftware yale mihla yolawulo lobalo lwabalimi beenkomo yenza ukuba kube lula ukusebenza ngenani elikhulu lee-odolo, ukuzihambisa ngokobume bazo. Kwinkampani yakho, izinto ziya kunyuka ukuba ubunzima obuvela kwinkampani yethu buyakunceda ekuphumezeni uluhlu oluyimfuneko lwemisebenzi engxamisekileyo. Unokusebenzisa iimephu zehlabathi ukumakisha ezakho iiyunithi zokwakha kunye neendawo zabachasi kuzo.
Sebenzisa isoftware yolawulo lwenkqubela phambili yabalimi beenkomo kwaye emva koko awuyi kuba nakho ukulibala eyona miyalelo ibalulekileyo. I-icon iya kutshintsha kwimephu, ebonisa ukufika emva kwexesha. Kuyakwenzeka ukuba uthathe amanyathelo ngexesha kwaye uncede umthengi ofake isicelo ngokukhawuleza. Inkampani yakho inokukhokelela kwimakethi ngenxa yokuba ubunzima bethu bukubonelela ngohlalutyo olufanelekileyo noluchanekileyo.
Iqela leSoftware le-USU lisebenzise ezona teknoloji zihambileyo ukuqinisekisa ukuba iingxelo zihlaziyiwe kwaye zisebenza ngokungenasiphako. Imveliso ebhalisiweyo yokubhalisa amafama eenkomo yimveliso ekuvumela ukuba uphendule ngokufanelekileyo kwimeko ezinokuthi zibe yingozi. Izenzo zolawulo kwifama zenziwa ngokungenamakhwiniba, oko kuthetha ukuba uya kuba nakho ukukhuphisana ngokulinganayo nabachasi abaphumeleleyo. Imveliso ekhethekileyo entsonkothileyo, eyenzelwe ngokukodwa ulawulo lobalo lwabalimi beenkomo, ikunceda ukuba usebenzise uphawu lokuprinta amakhadi enkcazo ekhethekileyo.
Uyakwazi ukusebenzisa umshicileli ukukhuphela uxwebhu kwiphepha ngexesha lokurekhoda.
Lungiselela inkampani yakho kunye nemisebenzi yeengcali ngoncedo lophuhliso lwethu kwaye emva koko, inqanaba lomvuzo liya kuba phezulu ngangokunokwenzeka. Le software ixhotyiswe ngemenyu ephambili eyilwe kakuhle. Inedashboard enomdla ekuvumela ukuba uphonononge ingxelo eneenkcukacha. Isoftware yethu yolawulo lwenkomo yomfama sesona sisombululo sifikelelekayo kwintengiso. Umsebenzi wefama ngokungenasiphako kuba bonke abasebenzi banakho ukusebenzisana neseti yangoku yezalathi zolwazi ezinikezelwa sisicelo sophuhliso lokuhamba komsebenzi.